Amabandla – The Ulwazi Programme
Umhlanganiso Ngokwebandla LamaNazaretha
Enkonzweni yamaNazaretha kunemithetho ebekelwe amakhosana (izinsizwa) kanye namakhosazane (izintombi). Uma beyiphulile leyomithetho bayahlawuliswa ngokuthi bangangeni ethempelini baze bahlambuluke ngendlela yaseKuphakameni. Inkosazane ayivumelekile ukuthi iqome kanye nenkosana nayo ayivumelekile ukuthi iqonywe kodwa kunendlela ebekiwe yokuthi baganane baze bashade besazigcinile. Uma kwenzekile bawephula lomthetho bayahlawuliswa ngendlela yaseKuphakameni. Lapha sibheka uma inkosazane noma inkosana iganwa umuntu ongakhonzi ebandleni … Read more
Categories Culture Tags Amabandla, AmaNazaretha, Amathempeli, Churches, Ezenkolo, Religion, Shembe, Temples
Ukwehlukana Kwezinkonzo Ebandleni LamaNazaretha
Inkonzo yamaNazaretha (Shembe) iyinkonzo ehlukanisile ngezigaba kanti futhi zonke izigaba kunezinsuku ezihlangana ngazo okuyizifungo zokudumisa njalo enyangeni. Kukhona amakhosikazi abizwa ngokuthi iNgudlungudlu, kube amakhosazane kanye namakhosana. Inkonzo Yamakhosazane Amakhosazane ahamba umhlangano obizwa ngokuthi u-25 njalo ngenyanga kusukela mhla zingamashumi amabili nane kuya mhla zingamashumi amabili nesithupha. Amakhosazane ayahlangana kulowomuzi kumbe ethempeleni lawo ukuyogcina isifungo sawo. Lapho … Read more
Enkonzweni yamaNazaretha kunendlela okugqokwa ngayo ngokwehlukana kwezigaba zakhona uma kuyiwa ezinkonzweni. Kunezigaba ezintathu: inhlalisuthi, amakhosazane kanye nomama. Inhlalisuthi Inhlalisuthi uma iya eSabatheni igqoka ibhulukwe elimnyama, ihembe elimhlophe kanye nokunye ngaphezu kwehembe, kungaba ibhantshi noma ijezi eliwuhafu ukuze ahlonipheke kahle. Uma kuyiSabatha inhlalisuthi kumele igqoke umNazaretha omude bese igqoka nomqhele ekhanda. Ngokomthetho inhlalisuthi kufanele ibhince uma … Read more